Goorma ayuu furmayaa fadhiga 1-aad ee caadiga ah ee Kalfadhiga 6-aad ee golaha Shacabka? – Kalfadhi
Gellinkii dambe ee shalay, waxaa magaaladda Muqdishu lagu qabtay kulankii ugu horreeyay ee guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Kulanka ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee kalfadhiga 6-aad ee golaha, waxaana kulanka uu ku saabsanaa dejinta ajendayaasha hor tebinta u leh fadhiyada golaha shacabka ee kalfadhigan lixaad ee golaha shacabka, waxaana kulanka shir-guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad, ayaa sidoo kale goob-joog ka ahaa kulanka.
Intii kulanka uu socday ayaa guddoomiyaasha guddiga joogtada ah waxaa laga dhageystay warbixino la xiriira gudi walba sharciyada horyaalla iyo sida ay u kala horreeyaan.
Xoghayaha guud ee golaha shacabka Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa sheegay in guddiga KMG ee Dastuurka laga dhegeystay warbixin ku aadan diyaarinta sharaciga doorashooyinka iyo kulamadii ay kasoo sameyeen goboladda dalka.
Guddiga KMG ee diyaarinta sharciga doorashooyinka ee golaha shacabka ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa uu waday kulano wada-tashi ah oo ay ka sameynayeen xarumaha maamul-gobolleedyada dalka, waxaana safarkoodii ugu dambeeyay ee ay ku tageen magaaladda Jowhar.
Xoghayaha guud ee golaha shacabka Mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa carabka ku adkeeyay in kulanka caadiga ah ee kalfadhiga 6-aad ee golaha shacabka uu furmi dooni 19-ka bisha Octoobar oo ku began Sabtida soo aadan.
Fadhiga 1-aad ee caadiga ahaa ee Kalfadhiga 6-aad ayaa la sadaalinayaa in uu hareyn doono xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo moshino ay xildhibaanno shegeen in ay golaha geyn doonaan.